IStumbleUpon iyaqhubeka nokondla iBhlog yam | Martech Zone
NgoLwesibini, Novemba 18, 2008 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Ngokuhlwanje bendihlalutya ezinye zeendawo ekubhekiswa kuzo zebhlog yam kwaye andikwazi kunceda kodwa ndibone ubalo olume ngaphezu kwayo nayiphi na enye - StumbleUpon Iqhuba ukugcwala kwabantu abaninzi kwindawo yam! Zininzi iindawo zokubhukisha kwiwebhu, kodwa iStumbleUpon ineso sicwangciso sinye ekungekho namnye kubo-banikezela amakhonkco ngomdla onxulumene nawo.
Xa ulayisha Isixhobo seStumbleUpon (leyo wena ngokupheleleyo kufanele), wena khubeka kwiziza kwaye ubanikeze oobhontsi phezulu okanye oobhontsi ezantsi. Njengoko uvelisa imbali, iisayithi iStumbleUpon ekuthumela kuzo ngokulandelayo ziyahambelana ngokusekwe kumathuba akho okubanika isithupha. Yinkqubo ephawulekayo ekrelekrele kakhulu.
Mhlawumbi kubaluleke ngakumbi kunenani leendwendwe endithumela kulo iStumbleUpon kukuba yindawo ekubhekiswa kuyo enezinga eliphantsi kakhulu! Phantse isiqingatha sabantu abathunyelwe kwindawo yam cofa kwenye iposti okanye iphepha kwiwebhusayithi. Eli linqanaba lokuhlawula eliphantsi kakhulu, elisezantsi kunayo nayiphi na enye indawo ekubhekiswa kuyo.
Ngokungafaniyo Slashdot, Digg, kunye nezinye iinjini ezinkulu zokubekisa, iStumbleUpon inene "Midas touch", enikezela ibhlog yakho okanye iwebhusayithi kunye nokugcwala okuza kufumana umxholo wakho ezifanelekileyo ngokusekwe kwiprofayili abayenzileyo kwizinto abazithandayo nabangazithandiyo.
Enkosi kakhulu komnye wabakhokeli abakhokelayo kwiwebhusayithi yam, IBittbox. Bathumele uninzi lwezithuthi ekundongezeni kwi-blogroll yabo kunokuba bendifanele ukubanceda. Ukuba ungumntu omtsha okanye umzobi onamava, qiniseka ukukhangela indawo yeBittbox kwaye ubhalisele ukutya kwabo. Yisiza esimangalisayo esineenkcukacha zokufundisa kunye neetoni zokukhuphela.
Qaphela kwakhona ukuba Twitter iyarhubuluza ithunyelwe! Ukuba awukhange usete i-Twitterfeed okanye ukongeza indlela yokwenza ibhlog yakho ukuze iposwe ku-Twitter, kuya kufuneka uyenze namhlanje!
Nov 19, 2008 ngo-9:45 AM
Ukongeza kokuthumela amaphepha akho kule mithombo Thatha ixesha lokuKhubeka okanye uTwitter malunga nomhlobo. Ngaphandle kokubuza, baya kuhlala bebuyisela ubabalo, kwaye kukho ukuthembeka okukhulu xa omnye umntu ethetha ngawe, iiRetweets, Stumbles okanye Diggs.
Nov 1, 2010 ngo-9:26 AM
Bendisoloko ndithandabuza injongo kunye nexabiso le-bookmarking yentlalo. Nangona ndibone ukunyuka kwetrafikhi kwibhlog yethu ukusuka kwiStumbleUpon, ndimangalisiwe kukuba abantu basebenzisa le nkonzo.
Nov 1, 2010 ngo-9:31 AM
Andivumi @chuckgose. Ndicinga ukuba abanye abantu batsaleleka ngokwendalo kwizixhobo ezahlukeneyo. Kukho isihlwele esilambileyo kwelinye icala lezo ndawo, nangona kunjalo. Ukuba ukuthumela ibhukhimakhi apha naphaya kunokuqhuba itrafikhi efanelekileyo, kutheni kungenjalo?
Nov 1, 2010 ngo-10:58 AM
Enye yeengxaki zokusebenzisa isikhubekiso nangona ukuthembela ekubetheni kukuba bangaphi abadibanayo nendawo yakho? Ndiqaphele ukuba iindawo zam ezimbalwa zivela ngamanani aphezulu ngokumangalisayo ukusuka ekukhubekeni, kathathu kuyo nayiphi na enye into eyalathisa i-traffic, kodwa inani lezimvo lisafana. I-avareji yexesha kwisayithi ayitshintshanga ngokwenene. Ndiyazi i-traffic traffic, kodwa kwangaxeshanye, kuluncedo njani ukuba abantu babethe isiza kwaye bahambe ngexesha elifutshane kwaye bangayi kwamanye amaphepha…
Iingcinga nje ezithile ngasemva kwengqondo yam, ndingathanda ukuva ukuba zithini na iingcinga zakho kuyo 🙂